किवी खेतीबाट लाखौँको आम्दानी - EAAWAJ (इ-आवाज)
किवी खेतीबाट लाखौँको आम्दानी
हेटौंडा : मकवानपुरको थाहा नगरपालिका वडा नं. ६ वज्रवाराहीका किसानले किवी खेतीबाट लाखौं आम्दानी गर्न थालेका छन् ।
‘एक गाउँ एक उत्पादन’ अवधारणाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मकवानपुरले करिव ३५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर किवी खेतीसम्बन्धी तालिम, प्रविधि र बिरुवा सहयोग गरेपछि बज्रवाराहीका ३० जना किसानको समूहले १० वर्षदेखि किवी खेति गरिरहेका छन् ।
अहिले बज्रवाराहीमा किवी खेती गर्नेको संख्या ५० पुगेको छ । १६ हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा किवि खेती गरिएको छ । किवी बिक्रीबाट १ जना किसानले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेका छन् । किवी फलमा भिटामिन सी प्रसस्त पाइने भएकाले उपभोक्ताले बढी रुचाउने गरेका छन् ।
त्यसैगरी पोटासियम, तामा, भिटामिन ई लगायत अन्य पोषक तत्व समेत पाइने भएकाले यो फल महंगो मूल्यमा बिक्री हुने गरेको छ । मकवानपुरमा उत्पादित किवि प्रतिकिलो २ सय ५० देखि ५ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको किसानहरु बताउँछन् ।
← कास्कीको सबै मतगणना सकियो, समानुपातिकतर्फ कुन दलको मत कति ?
प्रदूषण बढेसँगै कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व नै खतरामा →